Semalt Erläutert, tahaka ny Google Mail Transaktions e-mail nalefany
E-Mail Markup dia voafaritra ho endri-pahendren'ny data, izay mampiseho tsara ny endriky ny karazana e-mail. Ny mahasamihafa ny fisoratana anarana sy ny fandaminana ny marika E-Mail-Content dia manome fahafahana anao hanangona angona fanampiny ary hanatontosana ny mpanjifa ao amin'ny Google Apps toy ny kalandrie na ny mailaka.
Matetika ny fifandraisana amin'ny e-commerce, raha ny faharetan'ny Versand- und Confirmigungsalerts handray ny e-mail-Box, dia mora kokoa ny fahatsaram-pon'ny olona. Jack Miller, izay manam-pahaizana Semalt Digital Services dia manazava ny lafiny fampiasana e-mail-marika.
Taty aoriana dia nanomboka ny fampidinana ny data (JSON-LD), izay manomboka amin'ny karazana "application / ld-json" HTML-script androany:
Ny manaraka ny paikady dia mampiseho fanampiny Keymapsaara, izay mampitaha ny data miaraka amin'ny rafitra, izay mamadika ny informatika noforonina:
Raha tsy misy fahalalana momba an'i JSON dia tokony ho mora takarina fa ny olona iray "unique product" avy amin'ny "SomeDistributor - vps with desktop.com" dia nividy $ 60.
Ny toetra manaraka ilaina dia ilaina mba hanohanana ny e-mail-marika ho an'ny fanamafisana ny asa:
PriceCurrency - mampiasa ny ISO-Format mit drei Buchstaben
Händler - ist die Name einer Organisation oder Einzelperson
Accepted Offer - Includes Price, Assessment, Category, and more of the purchased products
Ny E-Mail-Markup dia ahitana ihany koa ny soso-kevitra sy ny safidin-tsoratra azo ifandaharana momba ny fampandrenesana ny fampandrenesana.
Ny fampitahandahiry alarobia dia azo aseho amin'ny alàlan'ny HTML na E-Mail-Vorlage amin'ny alalan'ny fanampiny na JSON-LD na Mikrodaten, toy izao manaraka izao:
Ny ohatra dia ahitana ny toetra ilaina ihany, kanefa ny Order-E-Mail-markup dia misy. Azo ampiasaina betsaka ireo fanampiny fanampiny mba hanatsarana ny fahombiazan'ny mpividy. Ity manaraka ity dia ny Tracking-URL sy ny Tracking-Number, mba hanamboarana ny Tracking-Code an'ny Operator ary ny Track-Packet-Verknüpfung amin'ny Google Mail- Google-Box to create.
Ho an'ny mpividy entana ve ny vaovao farany?
Ireo mpividy ao amin'ny Google Post dia mandray soa amin'ny e-mail-markup-intervention. Noho ny fampiasana Gmail amin'ny olona 1 tapitrisa mahery, ny fanatsarana ny vaovao amin'ny Gmail dia manana ny fahafaha-midinika lehibe indrindra.
Ireo mpandefa hafatra ihany afaka mampiasa E-Mail-Markierungen. Google dia mila ireto manaraka ireto:
Nachrichtenauthentifizierung amin'ny alalan'ny fampiasana ny domy domains dia mamaritra ny Framework Mail or Sender Policy
Tokony hadisoana ny fitsaboana Spam
A History of Sending More than One Hundred E-Mails per Day to Gmail Addresses
Ny hafatra rehetra dia tokony alefa amin'ny alàlan'ny fehezanteny e-mail adiresy
Tsy maintsy manaraka ny fitsipika arahin'ny Gassenabsender Gmail
Ny mpilatsaka an-tsitrapo dia tena mahasambatra ny mpividy. Ny online-purchases dia miandry ny fifandraisana amin'ny mpivarotra, raha misy ny vokatra sy ny mandefa. Ny lehiben'ny mpivarotra matetika dia mandefa e-mail miaraka amin'ny fanamafisana sy fanafoanana alàlana. Ao amin'ny orinasa lehibe na mena midambikaniana, anefa, mety ho an'ny mpividy sasany ny manatsara ny habetsaky ny fanamafisana ny rafitra mifandraika amin'ny e-mail.